Kala Bixin, Qalabeynta Qalabka Alluvial Dahabka - Ellicott Dredges
Xulashada Qalabka Kala Gooshaha iyo Qalabka ee loogu talagalay Auriferous (Dahabka) Lacag-bixinnada Alluvial (Macdanta Dahabka ah ee Alaabtii Bucketwheel)
Sanadihii la soo dhaafay baaritaano ballaaran oo jireed ayaa la soo saaray si loogu oggolaado ururrada macdanta dahabka ee mustaqbalka in ay falanqeeyaan dhinacyo kala duwan oo ka mid ah aagagga macdanta la qorsheeyay. Tijaabooyinkani waxay ku kala duwan yihiin hadba sida loola jeedo soo saarida. Xaalada qulqulka, gaar ahaan qulqulka qulqulka taayirrada lagu qalabeeyo, tijaabooyinka soo socda ee qiimeynta ayaa loo baahan yahay:
Xariiq qalooc leh oo buuxa oo wakiil ka ah dhammaan qeybaha jirka ayaa loo baahan yahay, gaar ahaan haddii jirku ka koobnaan karo waxyaabo ka baxsan awooda qulqulka qodista ama qaadista.
Si loo soo saaro macluumaadka ku qanacsan in lagu soo bandhigo qallooca dhimirka weyn, godadka imtixaanka waa in la qodaa oo dhammaan ashyaa'da ka soo baxa tijaabadan waa in la cabbiraa.
Caadi ahaan, daloolka tijaabada ama shaybaarka loo adeegsado soo saarida saamballada waa in la cabbiraa si loo waafajiyo wax aan ka yarayn cabirka ugu badan ee bamgareerka dumin doona walxaha.
Xaaladda isticmaalka suurtagalka ah ee 14 ″ (356mm) cabbirka tuubada Ellicottt® qodista qodista macdanta (1000 wadar ahaan loo rakibay HP iyo 150 HP dusha qodaha), tuunbo muunad ah oo aan ka yaraynayn dhexroor 12 dhexroor waa in la dhaqaajiyaa, iyada oo walxaha oo dhan lagu hayo tuubada dhexdeeda oo la tijaabiyey cabbirka. Tan waxaa lagu dhammeyn karaa iyadoo la adeegsanayo qalabka tuubbooyinka tuubbada iyo auger. Caqabadaha helitaanka aaladaha noocan ah, godadyada tijaabada waxaa lagu qodin karaa gadaal, jiidis, ama, haddii shuruudaha ciiddu saamaxdo, xamuul xagga hore ah. Booska tijaabada sidoo kale gacanta waa laga qashin karaa. Godka godka lagu qoday wuxuu ubaahanyahay god si tijaabin ah loogu tala galay.
Dhammaan walxaha laga soo qaaday daloolka tijaabada waa in la cabbiraa, gaar ahaan haddii ay jiraan wax muujinaya shey aad u weyn oo gudbaya matoorka qashinka. Haddii walxaha noocaas ah la helo, tijaabooyin dheeri ah waa in la sameeyaa si loo dejiyo boqolleyda walxaha ka badan awoodaha tuubbooyinka. Macluumaadkaa markaa waa in loo istcimaalaa si loo qeexo xulashada cabirka ku habboon ee qalabka.
Marka xigta, deebaajiga waa in lagu tijaabiyaa calaamadaha dhoobada ama shabagyada, iyo astaamaha sibidhka oo saameyn ku yeelan kara heerarka qodista iyo sidoo kale xulashada qalabka howsha.
Haddii walxaha si fudud loogu qodin karo sariish ama jiifa, waxaa aamin ah in loo maleeyo in boodboodka bulukeeti uu si buuxdo u buuxin karo wajiga qodista. Haddii sibidhka la kulmo, waxaa loo baahan yahay falanqayn ku saabsan heerka waxtarka mashiinka imtixaanka. Falanqayntaani waa inay isku dheelitirantahay cabirka qodida ee qodaha taayirka giraan socodka leh ee la isticmaali karo. Jiritaanka dhoobada waxay ubaahantahay adeegsiga nidaamka qulqulka mashiinka qodaha gaariga si loo hubiyo soosaarka sii socda.
Wixii ka dambeeya baahida suurtagalka ah ee nidaamka qulqulaya, jiritaanka dhoobada ayaa si xoogan ugu xallin doonta xulashada qalabka howsha.
Tijaabinta habboon ee jirka birta waxay u baahan tahay ugu yaraan saddex godad oo tijaabo ah. Godadkani waa inay ku yaalliin dhinaca sare, barta dhexe, iyo barta hoose ee deebaajiga. Adoo ka soo qaadanaya in falanqaynta walxaha ka soo baxa godadyadan ay muujinayaan in qulqulatadu ku habboon tahay qodista iyo gaadiid ku qaadashada qalabka, waxaa macquul ah in la qaato in mashruuca oo dhan uu iskaa u faa'iidi doono si looga faa'ideysto. Haddii ay dhacdo in natiijooyinku muujiyaan in qulqulaya aysan habbooneyn, baaritaan dheeri ah ayaa loo baahan doonaa. Beddelka sida kordhinta cabirka qashinka ama ka tagista qeyb ka mid ah deebaajiga waa la qaddarin karaa.
Ka sokow saamiga kor ku xusan, waxaa gabi ahaanba lama huraan ah in godad loogu qodo god ama salka hoose ee deebaajiga. Tani waxay lagama maarmaan u tahay laba sababood:
Inta badan unugyada macdanta waxay u muuqdaan inay leeyihiin qiyamka ugu sarreeya meesha ugu hooseysa.
Qiimayaashan sarreeya ee ku nool sariirta jiifka badanaa waxaa lagu daraa sagxad aan caadi ahayn oo ku taal sariirta jiifka. Sidaas darteed, dusha sare waa in ay qoddaa qashin qubka, haddii ay suurtagal tahay.
Tusaalaha muunadkan jiifku waa lagama maarmaan si loo ogaado haddii qulqulaya uu qodmi ​​karo sariirku. Kala duwanaanshaha sare waa in la dhisaa haddii ay jiraan. Haddii kaladuwanaansho sare u qaadis ah ay dhacaan, daraasad qoto dheer oo ku saabsan xaaladda xannibaadda waa in la sameeyaa si loo diyaariyo qorshe macdanta habboon. Sahaminta kor u qaadista sariirta gogosha waxay yareyn kartaa khasaaraha suuragalka ah ee qiimayaasha sarreeya. Haddii loo maleeyo in baaritaanka buuxa ee jirka saliidey uu dhamaaday uuna muujinayo qanacsanaan, waxaa laga yaabaa in dooro gaar ah loo xusho mashruuca.
Cabbirka farqiga waxaa lagu xakameyn doonaa cabirka shay ahaan, baahiyaha volumetric ee warshadda wax soosaarka, qoto dheer qoditaanka, iyo masaafada udhaxeysa goobta macdan qodista iyo nidaamka warshadeynta. Nidaamka waxsoosaarka waa in uu ahaadaa mid udhaxeeya qulqulka waxqabadka si loo yareeyo awooda faraska iyo maaraynta tuubooyinka ka dhasha masaafo dheer.
Sida kor lagu soo sheegay, iyadoo loo maleynayo in dhammaan shuruudahan si weyn dib loo eegay, cabirka cabbirka ku habboon ayaa la go'aamin karaa.
Ka dib xulashada qalabka qalalan, qorshe qodista macdanta waa in la diyaariyo taas oo u oggolaanaysa wadayaasha in ay falanqeeyaan qaabka guud ee mashruuca. Qorsha qodista macdanta waa in ay hubisaa in unugyada macdanta laga faa'iidaysto qaab sidan oo kale ah si loo joogteeyo hawlgal joogto ah oo faa iido u leh nolosha mashruuca. Qorshuhu waa in sidoo kale loo jadwaleeyaa inuu joogteeyo qiime joogto ah oo qodis iyo socodsiin ah sida ugu dhow ee suurtogalka ah soo kabashada joogtada ah ee macdanta dahabiga ah ee la soo saaro. Haddii kala duwanaansho la taaban karo laga helo waxa ka kooban dahabka, cabirka, ama kala duwanaanshaha waxyaabaha sababi kara dib u soo kabashada dahabka, mashruucan waa in loo dejiyaa si loo bixiyo habraac soo saarid labis ah.
Marka la qorsheynayo shaqada ama qaabka mashruuca, waxaa lagama maarmaan ah in la qeexo qiimeynta meelaha ay jiraan kala duwanaansho weyn oo ku saabsan soo-kabashada. Aagagga ay ka soo saaridda macdanta ay fududahay waa, haddii ay suurtagal tahay, waa in laga go'daa oo laga qodaa laga helaa meelaha ay ku jiraan dhoobada iyo dhumucdu. Kala-soociddan ayaa loo baahan yahay haddii jiritaanka slimes ama dhoobadu ay si weyn u saamayso soo-dejinta qalabka dejinta iyo heerka uu nidaamka hawlgalku u shaqeyn karo.
Haddii kala-duwanaanta ay u eg tahay in si fudud looga baaraandegi karo lagu qasi karo agabyo ay adag tahay in la hawl-geliyo welibana soo bandhigaya heerar wax soo saar oo hufan oo isku mid ah, mashruucan ayaa loo dejin karaa si ku habboon.
Taas ka dib, haddii aagagga fiirsashada sare laga helo, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la isku dheellitiro qodista iyo qodista ka-faa'iideysiga warshadda ka-faa'iideystayaasha. Tani waxay xaqiijineysaa in qiimayaasha aan lagu lumin iyada oo lagu dhaafo nidaamka iyada oo ah uruurinta aan caadiga ahayn ee dahabka ama macdanta, kuwaas oo qaarkood laga yaabo inay ka gudbaan nidaamka howshaas oo ay lumiyaan.
Aagagga ay ku badan yihiin dhagxannada ama sheyga ay adag tahay in la kala leexiyo waa in la gartaa ama laga fogaadaa ama loo tixgeliyaa qaab kale oo looga faa'iideysto.
Muunad qaadista jirka Alluvial
Marka lagu daro falanqaynta jirka macdanta si loo dhiso isku dheelitirka qalabka qalalan, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo oo la qeexo qiyamka ku jira deebaajiga. Qiimayaashan waa in lagu aasaaso aqoonyahan cilminafsiyeed oo la aqoonsan yahay oo aan dan ka lahayn kaasoo yaqaana waxyaabaha gaarka u ah sahanka guud. Sahankan wuxuu gaar ahaan muhiim u yahay haddii maalgashadayaasha laga codsado horumarinta mashruuca.
Marka loo eego qaabeynta mashruuca, sahanka sahanka lacag dhan ayaa loo istcimaali karaa in lagu dhiso jaangooyooyinka qiimeeya iyo aagagga laga yaabo inay noqdaan madhalays ama qiimo aan qiimo lahayn. Qorshaha miinadu waa inuu ogolaadaa in laga gooyo meelaha madhasha ah ama meel qiimo hoose leh ka hor inta aan la qodin miraha dahabka qaada. Haddii ay jiraan aagag mihiim ah oo dhul madhan oo leh meel sare oo qiimo leh oo ka hooseeya, guud ahaan waxqabadka mashruuca waxaa lagu hagaajin karaa xawaaraha sare oo ay ku xigto qodista heerka caadiga ah.
Intaa waxaa sii dheer, daraasad sambalka oo si buuxda loo sameeyay oo dhammaystiran ayaa u oggolaaneysa xulashada ugu habboon ee qalabka wax lagu karsado. Waxay kaloo hagi kartaa qodista iyo qodista si loo joogteeyo hawlgal faa'iido doon ah. Isku-darka daraasadda qiimaha ay la leedahay qorshaha miinadu waxay sare u qaadi doontaa heerka soo kabashada inta lagu jiro nolosha mashruuca. Intaas waxaa sii dheer, haddii qulqulka lacageed ee sareeya uu lagama maarmaan u yahay marxaladda koowaad, qorshaha mashruuca oo ku saleysan qiyamyada la yaqaan wuxuu soosaarayaa lacag aad u sarreysa marka la bilaabayo mashruuca.
Qalabka kala sooca waa in lagu xushaa iyadoo lagu saleynayo macluumaadka ay soo saareen hannaanka xulasho qaadista iyo kala sooca. Qalabkan waa in loogu talagalay in lagu maareeyo cabirka agab ee buuxa ee ay ka keento baxda. Qalabka waa in loogu talagalay in lagu oggolaado kala sooca aasaasiga ah ee sheyga dahabka ama macdanta ka sameysan dhagax, dhagaxa, iyo kubadaha dhoobada haddii ay jiraan. (XUSUUS: haddii kubadaha dhoobadu jiraan oo ay jiraan tiro aad u badan oo ah agab dahab ah, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in lagu tuuro dhammaan kubadaha dhoobada ah si looga hortago in lagu wareejiyo buullada kubbadaha dhoobada ah).
Kala soocida koowaad waxaa lagu fulin karaa trommel sida ku habboon cabirkeeda si loogu kala saaro cabbirada dahabka leh ee ka soo qulqulaya qashinka iyo qashinka oo leh bakeeriga qashinka, iyo qashinka loo dhiibo dhagtaha ama nidaamka gaarsiinta dabagalka. Ka dib kala-guurka koowaad, sheyga dahabka keena waa in loo gudbiyaa aaladda jigging ama aaladda kale ee culeyska culeyska sida loo arko mid ku habboon.
Waxyaabaha ka haray nidaamka jigging ama jeexjeexyada ayaa si dheeraad ah loo ururiyey loona socodsiinayaa sidii loogu baahdo. Adoo u qaatay in qalabka oo dhami u shaqeeyaan sidii loogu talagalay oo kor lagu sharaxay, dahabka waa la soo kaban doonaa.